Zvirongwa zvitatu zvekuzvinyorera | Linux Vakapindwa muropa
Rimwe zuva, mumwe munhu akataura pasocial network nezve mufaro wake nekugona kuvhura software yekare iyo yaakanyora dhayari rake achiri mudiki. Beyond yehunyanzvi ruzivo ini yandisingataure, nekuti akazviita neMac, Chainakidza chiitiko chekufungidzira chakamutungamira kuti aenzanise zviroto zvake nemapurojekiti sejaya neangu iyezvino.
Kana tichitaura nezvekunyora zvirongwa muchinyorwa chino, hatisi kutaura nezvetsamba nemabhizinesi magwaro (LibreOffice inobata izvo zvakanaka), kana nezve maficha ekunyorera anotevera-mutengesi. Isu tinotaura nezvekushandisa zvinoita kuti zvive nyore kwatiri kuzvinyorera isu.
1 Nei uchizvinyorera?
1.1 Maitiro ekuvandudza
1.2 Siya zvinyorwa
1.3 Kuchengetedza kutarisisa
2 Zvirongwa zvitatu zvekuzvinyorera wega
Kubva paudiki isu tinodzidziswa kuti kunyora chinhu chinoitirwa vamwe. Tsananguro yezororo muchikoro chepuraimari, chinyorwa paDon Quixote chesekondari, kana chirevo chekoreji. Hupenyu hwakawanda hwekushanda hunoshandiswa kunyora maemail, zvibvumirano, memos uye zvirevo uye, nguva yemahara yakakamurwa pakati pekuita chimwe chinhu nekuchitaura pamasocial network.
Nekudaro, sekureva kwenyanzvi, kutinyorera kunounza mabhenefiti makuru
Ongororo dzakasiyana siyana dzinoti chiitiko chekunyora chimwe chinhu chinokanganisa pfungwa dzedu. Maererano nenyanzvi, Kuisa matambudziko nekutya mukunyora kunobatsira kudzikisira kushushikana, nepo kunyora zviroto uye kubudirira kuita kuti vanhu vave neutano uye vafare.
Inzvimbo yakajairwa kutaura kuti mazwi anotakurwa nemhepo. Kutaura kuri nyore, zvakareruka sekukanganwa uye kuzvipikisa. Ichokwadi kuti tinogona kudzima izvo zvatinonyora, asi izvo zvinoreva kutora dambudziko kuzviita. Kuisa chimwe chinhu pakunyora inzira yekuita kuti zviome kwatiri kuti tisachengeta zvivimbiso zvatakaita kwatiri.
Kodak naPolaroid vaive mubhizimusi rekuita kuti zvive nyore kuti vanhu varangarire nguva dzekufara uye vadikani vaive vaenda. Nzira yekuita izvi yaive yekugadzira zvishandiso uye zvinotsigira izvo kuburikidza nenzira yemaziso uye zvemakemikari zvinobvumidzwa kuzvichengetedza. Pane imwe nguva ivo vakapedzisira vavhiringa svikiro nechinangwa uye vakatenda kuti bhizinesi ravo raive kutengeswa kwemavara emifananidzo nemafirimu. Izvi zvakavatadzisa kubheja pane digital technology.
El Kuchengeta runyorwa rwechigarire rwezvinangwa zvedu zvinoita sekambasi. Izvo zvinotibvumidza isu kuona kana isu taifara kwazvo nezvekuita zvatakaita pese patakabuda munzira uye zvinotimanikidza kushamisika kana izvi zvinangwa zvichiri kushanda.
Zvirongwa zvitatu zvekuzvinyorera wega
Mune ino kesi isu tine chikumbiro izvo zvinotibvumidza isu kunyoresa zvinyorwa zvedu maererano nenguva uye nekuvapa mazwi akakosha kwavari, ayo anofambisa kudzosa kwavo vachishandisa ese masisitimu.
Inokutendera iwe kuisa mifananidzo, mafaera uye mifananidzo.
Backup mune yakamanikidzwa faira.
Gore rine mazwi anonyanya kushandiswa uye ma tag.
Export kune yakajeka mavara, HTML kana Latex.
Chirongwa ichi Iyo inogona kushanda seese ari maviri anotora-kutora app uye yakavanzika dhayari panguva imwe chete. Muzviitiko zvese zviri mumamiriro ekunze. Pamusoro peiyo vhezheni yedesktop, iine imwe yemafoni nhare.
Iyo ine yakapusa interface uye zvinotevera zvinhu.
Journals anogona encrypted pamwe AES256 mureza.
Inesimba uye inonzwisisika manejimendi manejimendi.
Kugadzirwa kwezvakakosha zvekuita zvinyorwa.
Otomatiki fomati yemazita uye zvinyorwa zvidiki.
Kushandiswa kwemashoko akapfuma.
Tsvaga uye kutsiva chinyorwa chishandiso.
Mikana yekugadzira zvinongedzo pakati pezvinyorwa.
Kutaura kwedu kwekupedzisira Izvo hazvisi zvekuvanzika zvakavanzika sezvo zvinosanganisira kushandiswa kwegore.
Rwendo runotibvumidza kuti tiwedzere zvinyorwa zvemunyori tichishandisa iyo nharembozha, desktop desktop, kana webhusaiti yako Kubvumirana kunoitwa kuburikidza neGoogle Drive.
Humwe hunhu hwayo ndihwo
Kuisa otomatiki kwezuva nenzvimbo.
Iyo inobvumidza kuisa mapikicha uye mavhidhiyo kune iyo matumbo.
Tsvaga matikiti nenzvimbo, karenda kana nguva yenguva.
Kudzivirirwa kwekupinda uchishandisa PIN.
Export yezvakanyorwa mu .docx fomati uye purinda kune PDF
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Mapurogiramu matatu ekuzvinyorera isu
FreeBSD ikozvino inogona kuvakwa kubva kune mamwe masisitimu anoshanda